Aza aparitaka | Hevitra MPANOHARIANA
izaho koa efa nahazo tahaka an'io fa ankizy marary mila fanampiana no mailaka voaraiko t@ izay!ny ahy aloha namparitako e! satria oe mba mahazo 0,35 cents ilay zaza rehefa mandefa mailaka iray aho! ka izay raha efa afaka nodidina ihany ilay zaza na tsia! toa oh alaipanahy aho oe fitadiavam-bola indray ve izy ity sa ahoana!
Nampidirin'i news2dago @ 11:03, 2008-01-23 [Valio]
Nohveriko hoe ianao no nahazo ilay vola!!!
Nampidirin'i jentilisa @ 11:34, 2008-01-23 [Valio]
HIHIHI Mampalahelo e
Asa izay niandohany fa sarin'i Maria any Guadaloupe io, any Mexico!
Ngah io ihany, fa misy ny tohivakan'i Joda e, tohivakan'i je ne sais pas!
Io anie no nanoratako tamin'ny herintaona am le resaka olomasin'ny katolika sy ny sarivongana e,
Ankoatry ny karazan'ozona lazain'i Jentilisa io dia fahalemen'ny finoana io.
Raha herin'andro firaisam-pinoana ity, oviana vao hotononina amin'ny faharesen-dahatra tokoa ny hoe : IZAHO mino an'Andriamanitra RAY TSY TOHA, izany hoe MAHEFA NY ZAVATRA REHETRA? asa lahy
Dia hoy aho hoe : Aparitaho ny tena finoana fa tsy ny finoanoam-poana!
Nampidirin'i harilova @ 11:55, 2008-01-23 [Valio]
Nizaha le fiandohany aho dia nahita ireto sao mahaliana anareo
na ity misy commentaire
Nampidirin'i harilova @ 11:57, 2008-01-23 [Valio]
Misaotra an'i harilova fa dia hijery azy soa aman-tsara aho.
Nampidirin'i jentilisa @ 14:16, 2008-01-23 [Valio]
Nandrasako handray anjara i harilova vao nanoratra aho :-).
Izaho aloha ry jentilisa rehefa mahazo mailaka tsy ampoizina (spam) toy ireny dia any amin'ny fanariam-pako avy hatrany e. Ary endraso eo i Paoly raha ny hanaparitaka azy. (Tsy fandrabiana apôstôly sanatria fa fomba fitenyio an). Raha soratra masina no resahina dia ny baiboly irery ihany no izy e (hevitro manokana io an ;-) ).
Izaho dia tsy matahotra ozona avy amin'ny mailaka na "prospectus" toy ireny, ary tsy miandrandra fahagagana avy amin'ny fihetsika tsy misy dikany. Ny hatsembohako ihany no hihinanako e :-).
Nampidirin'i Tokinao @ 22:36, 2008-01-23 [Valio]
Dia misaotra anao nanoratra e! henjana ny fitenenana saingy mifanakaiky amin'izay ihany ny ahy e!
Nampidirin'i jentilisa @ 07:07, 2008-01-24 [Valio]
Mety hihevitra avy hatrany ianareo hoe resaka katolika izany. Tiako hamafisina anefa fa TSY KATOLIKA VELIVELY ny fihetsika toa izany. Ary io moa i Harilova manamafy.
Ny fivavahana miaraka amin'i Masina Maria (dévotions) na dia ho an'ny Katolika aza dia tsy misy hifanerena, ary indrindra indrindra tsy misy fampihorohoroana. Ny finoana ho an'ny Katolika dia finoana ateraky ny fitiavana fa tsy ateraky ny tahotra na fiandrandrana valiny hafahafa.
Nampidirin'i Hery @ 09:37, 2008-01-24 [Valio]
Tsy misy famelezana katolika aloha ilay izy fa misy mampiasa azy zavatra hafa. Fa na izany na tsy izany dia nahitako zavatra ny namaky ilay wiki ka iza vao manomboka miha-azoko ity Guadalupe malaza any amerika ity.
jereo amin'ny rohin'ny mpanoratra.
Nampidirin'i ny mpanoratra @ 10:26, 2008-01-24 [Valio]
Ny tsy milay amin'izy itony dia izy milalao fon'olona e, ankizikely marary, olona traboina, mila manamafy finoana, raha te hanankerana. Indrindra moa izao kriy ekonomika izao dia lasa indray izany ny spam e. Ary ny tena gaigy anie dia ilay mpandefa amboalohany no tena mahazo an'ilay 0,35 cts fa tsy ilay (odiana) marary akory e. Ianao izay manamparitaka azy izany dia anisan'ny mpampidi-bola an'ilay mpandefa azy voalohany. Izany hoe misy karazany maro koa aloha izy ireny e!
Ary isika ve dia hiandry sarin'i masina maria vao hino na hanao zava-tsoa fa tsy zavatra tokony efa tsianjery maimbo izany hoy ilay mpanitatra.
Nampidirin'i Ikalakely @ 11:13, 2008-01-24 [Valio]
Manana rahavavy any ampita any aho dia rehefa mahazo an'ireny taratasy ireny dia mndefa dika any aminy kanjo dia voateny hoe "aza mandany andro" fa isan-taona miverina ireny fa tsy dia misy antony akory ! Ovainy fotsiny ny sary sy narana hono ; ohatra tamin'ilay hoe misy ankizivavy marary mafy etc. Tsy haiko aloha an ! izaho sady tsy vonon-kaniratsira no tsy te-hadalaina koa fa dia anatra alefa dia samy mandray izay tandrify azy e !
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 15:28, 2008-01-25 [Valio]
Ary ahona ny amin'ny MEDIUM kay ?
Maro ny influence anaty internet. Ny hevitrareo ?
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 15:31, 2008-01-25 [Valio]
Dia samy manana ny finoany ny tsirairay ry Tsikisariaka.
Nampidirin'i jentilisa @ 15:47, 2008-01-25 [Valio]
mbola nahazo mailaka indray a androany ary dia sary masina bobaka be no ato koa manorata any @ news2dago@yahoo.com izay liana mba te ahita ny sary!!
Nampidirin'i news2dago @ 17:12, 2008-01-28 [Valio]
Io ange no mahavariana aminy e! Misy dia manararaotra mihitsy! oviana re vao ho lefy io zavatra io aty amin'ny tontolo malagasy!
Nampidirin'i jentilisa @ 06:48, 2008-01-29 [Valio]